Window Server ၏ Permission များ
Monday, September 16, 2013 ကိုသစ္စာ
ကျွန်တော် ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့် ပို့စ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ တွေ့နေကြ မြင်နေကြဖြစ်တဲ့ Window Server Permission ရဲ့ အဓိပါယ်တွေကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Server တွေမှာ အတွေ့ရများတဲ့ Permission တွေထဲကတော့
1.Traverse Folder/Execute File
အခန်းတစ်ခုထဲက ဖိုင် ဒါမှမဟုတ် folder တွေကို အခြားအခန်းထဲသို. ရွေ.ခွင့်ပေးမပေး ဖြစ်ပါသည်။Execute file ဆိုတာကြတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့ program file တွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။
2. List Folder/Read Data
List Folder ဆိုတာကျတော့ အဲ.ဒီ permission သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ၊အခန်းတွေကို မြင်နေရမလား၊မမြင်ရဘူး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Read Data ဆိုတာကျမှ ဖိုင်တစ်ဖိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖတ်လို.ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Read Attributes ဆိုတာ Folder အတွင်းမှာရှိတဲ့ File တွေ Folder တွေရဲ. Attributes တွေကြည့်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Attributes ဆိုတာ NTFS က သတ်မှတ်သော Read Only တို. Hidden တို.ဖြစ်ပါသည်။
4. Read Extended Attributes
သူကျတော့ Folder အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ folder တွေရဲ. Extended attributes တွေကို ကြည့်ခွင့်ပေး မပေးသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။OS က သတ်မှတ်တဲ့ Attributes မဟုတ်ဘဲ Program တွေက သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါသည်။
5. Create Files/Write Data
Create File ဆိုတာကျတော့folder အတွင်းမှာ file တွေ create လုပ်ခွင့်ရှိမရှိ write data ကျတော့ရှိပြီးသား file တွေကို save လုပ်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။
6. Create folder/Append Data
Create Folders ဆိုတာကျတော့ အဲ့ဒီ Permisson သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ နောက်ထပ်အခန်းတွေ တည်ဆောက်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။Append Data ကျတော့ ရှိပြီးသား ဖိုင်တွေအတွင်းက Data တွေကို ပြုပြင်ခြင်း၊ Overwrite လုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဘဲ အဲ့ဒီ Data တွေရဲ.နောက်ဆုံးကနေ Data တွေထပ်ထည့်ခြင်းကို Append လုပ်ခြင်းလို.ခေါ်ပါသည်။ Append ဆိုတာ နောက်ကနေ ထပ်ထည့်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါသည်။
7. Write Attributes/Write Extended Attributes
Write Attributes ကျတော့ NTFS ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Read Only/Hidden တွေကိုပြင်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။၄င်း write ဟာ file/folder တွေတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ Write Extended Attributes ကျတော့ program တွေကသတ်မှတ်တဲ့ attributes တွေကို ပြုပြင်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။
8. Delete Subfolders and File
သူကျတော့ ဆင့်ပွားအခန်းနှင့်ဖိုင်တွေကို ဖျက်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။
Files and folder တွေကို ဖျက်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ အဲ့ဒီအခန်းနှင့်ဖိုင်မှာ delete permission မရထားခဲ့ဘဲ parent ကနေ Delete subfolder and files permission ရနေခဲ့ရင် ဖျက်လို.ရနေမှာဘဲ ဖြစ်ပါသည်။
10. Read Permission
File and Folders တွေရဲ. Permission တွေကို ကြည့်ခွင့်ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။
11. Change Permission
File and folders တွေရဲ. Permission တွေကို ပြုပြင်ခွင့် ပေးမပေး သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။
12. Take Ownership
Files and folders တွေရဲ. Owner ကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုမပြု သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါသည်။ဖိုင်ပဲဖြစ်စေ အခန်းပဲဖြစ်စေ ၄င်းတို.ရဲ. owner ဟာ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ folder ပေါ်မှာ မည်သည့် permission သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်စေ permission ကို ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်ဟာ လေ့လာဆဲလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်အရေး ကျွန်တော့အတွေး ကျွန်တော့်အသိအမြင်များ အမှားပါက ညီငယ်တစ်ယောက် မသိတတ်မှားလို့သာ ထင်မြင်ပီး ထောက်ပြပေးကြပါ။ လေးစားစွာဖြင့် ကိုသစ္စာ (လေ့လာဆဲ လူငယ်တစ်ယောက်)
ခုလိုရေးပေးတဲ့တွက် ကိုသစ္စာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း နည်းပညာလေးတွေ ဆက်လက်မျှဝေနိုင်ပါစေလို့......